Isi nri na ... | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Atiya: Nri na ...
Enwere ike ime achịcha na onye na-eme achịcha n'emeghị yist akọrọ, ma na-eko achịcha nkịtị? Ego ole ka igbakwunye na ogbe?
Enwere ike ime achịcha na onye na-eme achịcha n'emeghị yist akọrọ, ma na-eko achịcha nkịtị? Ego ole ka igbakwunye na ogbe? Ọ bụghị naanị na o kwere omume, ma ọ dị mkpa. M na-eji uzommeputa na-esote, stibrennym na Intanet. ...
esi esi nri nke kachasị ọkụkọ
esi esi nri nke kachasị ọkụkọ Cook maka ihe dị ka awa. Wepụ oge ụfụfụ mgbe niile ka broth bụ uzo. Wepu ọkụkọ ahụ, gbasaa (ọkpụkpụ iche iche, anụ dị iche iche). Ghichaa anụ ahụ. Fry 1 ...
esi ehicha pollock na oge ole
otu esi ehicha pollock na oge ole Gbalịa bee, bee n'ime iberibe, tụgharịa na ntụ ọka na ighe ke skillet na butter. Ọfọn, nnu. Ana m eme nke a: kpochara, bee n'ime iberibe.
kedu ka esi esi mee ka tost na-enweghị toaster?
kedu ka esi esi mee ka tost na-enweghị toaster? Achọtara m otu isiokwu ebe a kọwara ihe niile n'ụzọ doro anya ka esi mee ka ọ dị mma.) Http://expert-byt.ru/kak-sdelat-tosty-bez-tostera/ 🙂 Naanị mkpa ka a gụchaa pan. Tinye ya na ọkụ, tinye nri n'elu ya ...
Ajụjụ banyere ọnụọgụ ole grams kwa iko?
Ajụjụ bụ gram ole dị n’iko ahụ? Echere m na otu iko dị otu iko bụ 200gr. Ana m eji “ndozi” a mgbe ọ bụla: 1/4 iko 60ml 1/3 iko 75ml 1/2 iko…
Gwa m ngwa ngwa uzommeputa maka salad nke sie poteto ???
Gwa m ngwa ngwa uzommeputa maka salad nke sie poteto ??? Kpochapu poteto sie, tinye cucumbers, nke a na-etinye na mmanụ na-esi nri. Tinye a ala na efere, itu na Mayonezi na garnish na Mpekere nke ọhụrụ cucumbers ...
Ogologo oge ole ka esi esi nri noodles enweghị ikwu "ruo mgbe njikere" zuru oke ole? edeghị ya na ngwugwu ahụ, na ihe dị ebe ahụ
Ogologo oge ole ka esi esi nri noodles enweghị ikwu "ruo mgbe njikere" zuru oke ole? Edeghị ya na ngwugwu ahụ, na nke ahụ sitere na nkeji 3 ruo 10, dabere na ọkpụrụkpụ nke onyinye ...
Esi esi kpoo nduku?
Esi esi eghe nduku? Na ọtụtụ mmanụ sunflower na n'ọnọdụ ọ bụla anaghị emechi mkpuchi ahụ. jiri nwayọ na nwayọ)) nke mere na ọ dị ka anụ, ee .. friji mbụ, mgbe ahụ n’elu…
Kedu ihe dị iche n'etiti oyi na-ekpo ọkụ?
Kedu ihe dị iche n'etiti oyi na-ekpo ọkụ? okpomọkụ na oge 🙂 Anwụrụ anụ ọkụkụ na okpomọkụ dị iche iche: 1820Y na-ese anwụrụ ọkụ; 3550 na-ekpo ọkụ ọkụ; 70120C na-agbagharị na anwụrụ ọkụ. Kasị eji mbụ ...
na-ehicha ihe ọṅụṅụ na-eme ka ị na-eri nri, gwa m uzommeputa
obi cheese dessert na a blender, gwa m uzommeputa m iti 200gr. obere cheese chiri na 0,5% mmiri ara (gr. 150) na otu chocolate protein scoops. Ọ na-apụta na mmanya dị ala obere calorie protein maka nri tupu ụra ...
Awụsara nchara ígwè? Azụrụ m otu cauldron ụnyaahụ, kụrụ ya onye na-asọ oyi. Ugbu a nchara na mgbidi. Nke a ọ dị mma maka akpụkpọ ụkwụ ígwè?
Awụsara nchara ígwè? Azụrụ m otu cauldron ụnyaahụ, kụrụ ya onye na-asọ oyi. Ugbu a nchara na mgbidi. Nke a ọ dị mma maka akpụkpọ ụkwụ ígwè? Mmebi nke nkà na ụzụ nke nkwadebe ígwè, ọ bụrụ na ụrọ apụtaghị ihe ọ bụla ga-enyere aka. Anyị ga-agba mbọ ịfe ...
Ha na-ekwu na poteto na-atọ ụtọ na ngwa ndakwa nri. Esi eme?
Ha na-ekwu na poteto na-atọ ụtọ na ngwa ndakwa nri. Esi eme? anyị emebeghị ogologo oge. Anyị nwere afụnwu ọkụ na-agba ọkụ. ọ dị mkpa ka ị gbasaa ọnọdụ dị mma, ya bụ, na microwaves (na ...
awa ole ka obụpde àkwá ????
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji sie anụ? ???? ma ọ bụrụ na ke crease m etinye ha na ketulu na mgbe ọ na-emegharị ya, ha na-ete NAN ALLA 10 nkeji - sie sie ike are nwere ike ịbụ onye mmalite mmalite)). Na mkpokọta, sie sie ike ...
Ndị mmadụ! Ònye nwere uzommeputa maka patties na pickles? Kekọrịta, biko!
Ndị mmadụ! Ònye nwere uzommeputa maka patties na pickles? Kekọrịta, biko! nne nne m na-esi nri na pickles n'oge ndụ ya: ọ na-etinye yist mgwakota agwa mgbe ntụ ọka ahụ na-arị elu, ...
Kedu esi esi nri maka di na nwunye, n'ihi na enweghi steam?
Otú e si esi na-azụ maka a di na nwunye, ọ bụghị a aha steamer ?? Were a ite, wụsa a obere mmiri n'ime ya, na-etinye n'ime nta pan wụsa a obere mmiri na-etinye a obere saucepan na drushlag, e ...
M na-agwa gị ka ị nye uzommeputa maka ngwa ngwa ngwa ngwa na-esi nri nri n'ụlọ. Daalụ!
M na-arịọ gị ka ị tụọ aro maka ngwa nri maka nsị n'ụlọ. Daalụ! Ntụziaka "Pheasant na Bohemian" Maka Ntụziaka ị ga-achọ: - Pheasant - 1 pc. - abụba - 50g - mmanụ ma ọ bụ abụba ...
Kedu ka esi esi kpochapu achịcha na oven?
Kedu ka esi esi kpochapu achịcha na oven? Were mmanụ fesa mmanụ ma fesa ya na nnu nnu gwakọta galik ma gaa n'ihu. Iji mee ihe n'eziokwu, anaghị m echegbu onwe m na crackers. Ịchacha ...
Kedu ka esi ehicha azụ ka scales ghara gbasasịa niile na kichin?
Kedu ka esi ehicha azụ ka scales ghara gbasasịa niile na kichin? Ọ dị mfe ntancha azụ ma ọ bụrụ na a tinye ya na mmiri ọkụ ma ọ bụ na mmiri oyi na mmanya. Fins dị mma ...
esi esi esi ocha ofe na okpueze?
esi esi esi ocha ofe na okpueze? M n'anya na-esi nri multivarka Redmond ero ofe bụ nnọọ tọrọ ụtọ, esi nri ebe a na a Ntụziaka http://www.multivarka-vari.com/gotovim-v-multivarke-redmond-gribnoj-sup/ ìhè na-atọ ụtọ ofe, na Ntụziaka adịghị mfe! ...
Kedu ihe iji esi nri site na Roach?
Kedu ihe iji esi nri site na Roach? Mkpụrụ si na roach Efrata: Roach na ihe ọ bụla, ntụ ọka, nnu nụrụ ụtọ, mmanụ na-esi nri, nsen. Otu n'ime efere kacha amasị m. Esi nri a, roach nwere ike eri ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,401.